I-Arctic Ocean: izici, isimo sezulu, izimbali, izilwane nezimo zamanje | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Phakathi kwezilwandle zomhlaba, i- I-Arctic Ocean iyindawo encane kunazo zonke futhi esenyakatho kakhulu yamanzi. Kubhekwa nolwandle olubanda kunazo zonke emhlabeni wethu ngoba amanzi alo amaningi ambozwe yiqhwa elikhulu unyaka wonke. Ngaphakathi kunempilo eguqulelwe kulezi zimo ezinobutha zesimo sezulu esibandayo. Kodwa-ke, ingenye yezilwandle ezithinteka kakhulu yimiphumela emibi yokuguquka kwesimo sezulu nokushisa komhlaba.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici, ukuziphendukela kwemvelo, izitshalo nezilwane zoLwandle i-Arctic.
2 Ukwakheka nesimo sezulu solwandle i-Arctic
3 Izimbali nezilwane zasolwandle i-Arctic
4 Isimo samanje
Umehluko omkhulu onawo ne I-Antartic Ocean ukuthi ine-shelf yezwekazi lapho iqhwa likhona. Endabeni lapho ukuncibilika kweqhwa kuqhubeka ngaleli zinga, kuzoba iSouth Pole ekhuphula izinga lolwandle. I-Arctic Ocean ayinalo ishalofu lezwekazi, kodwa linamanzi ayiqhwa kuphela. Lokhu kubangela imfucumfucu efriziwe ukuthi intanta emanzini amaphakathi. Lezi zindimbane ezinkulu zeqhwa zizungezwe ulwandle lonke phakathi nezinyanga zasehlobo nasebusika, Njengoba amanzi eba yiqhwa, ukushuba kwawo kuzokhula.
Itholakala enyakatho Nenkabazwe esifundeni esiseduzane ne-Arctic Circle. Ibeka umkhawulo ezifundeni eziseduze nase-Asia, eYurophu naseNyakatho Melika. Amanzi awela naye ulwandle olwandle ngokusebenzisa iStrait of Fram noLwandle iBarents. Iphinde inqamule iPacific Ocean ngeBering Strait kanye nalo lonke ugu lwamalwandle e-Alaska, eCanada, eNyakatho Yurophu naseRussia.
Ukwakheka nesimo sezulu solwandle i-Arctic
Yize ukwakheka kwalolu lwandle kungaqondakali kahle, kucatshangwa ukuthi lwakhiwa kudala. Kunezimo ezeqile zemvelo ezenza ukuthi lolu lwandle lube nzima. Kuhlala abantu base-Eskimo cishe iminyaka engama-20.000 XNUMX. Laba bantu bakwazile ukujwayela isimo sezulu esibi kakhulu esitholakala kulezi zindawo. Ukusuka esizukulwaneni ngesizukulwane bakwazile ukudlulisa ulwazi oludingekayo ukuze bakwazi ukujwayela nokujwayela impilo kulezi zindawo.
Izinsalela zitholakale kulolu lwandle olukhombisa ubufakazi bokuphila okuphilayo okuyiqhwa unomphela. Kulinganiselwa ukuthi yenza cishe eminyakeni eyizigidi ezingama-70 edlule ibinezimo ezifanayo noLwandle iMedithera olunazo namuhla. Futhi kungukuthi kwezinye izikhathi nezikhathi ze- isikhathi sokuma komhlaba lolu lwandle lutholakale ngokuphelele ngaphandle kweqhwa.
Amazinga okushisa aphakathi nendawo ebusika kulokhu ukwehla kolwandle kumanani we -50 degrees, okwenza ukusinda kule ndawo kube i-odyssey impela. Isimo sezulu se-polar singesinye sezimo ezibandayo kakhulu emhlabeni, okudala ukuthi sibe nokushisa okungapheli noma okuncane kakhulu ngonyaka. Ihlukaniswe kakhulu ngezinkathi ezimbili zezinyanga ezi-6 ngayinye. Ake sihlaziye iziteshi ezimbili ezise-Arctic Ocean:
Ehlobo: Ngenyanga yehlobo amazinga okushisa ajikeleza cishe ku-0 degrees futhi kunokukhanya okuqhubekayo okuvela elangeni amahora angama-24 ngosuku. Kukhona nenkungu eqhubekayo neqhwa evimbela ukuthi iqhwa lingancibiliki ngokuphelele. Kusukela ngesikhathi sasehlobo kukhona nezishingishane ezibuthakathaka ezinemvula noma iqhwa.
invierno: izinga lokushisa lifinyelela amanani we -50 degrees futhi kukhona ubusuku obungapheli. Ngalesi sikhathi sonyaka ilanga alibonwa noma nini. Isibhakabhaka sicacile nezimo zezulu zizinzile. Lokhu kungenxa yokuthi alikho ithonya elivela elangeni.
Ngeke sikhohlwe ukuthi isizathu esiyinhloko sezimo zezulu ngenxa yesenzo selanga. Ngakho-ke, phakathi nezinyanga zasebusika kunezimo zezulu ezizinzile kakhulu. Ngenxa yemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu kanye nokushisa komhlaba, amazinga okushisa ezinyangeni zasehlobo akhuphuka ngokwanda, abangela ukuncibilika cishe ngokuphelele kwe-Arctic Ocean yonke.
Izimbali nezilwane zasolwandle i-Arctic
Yize lolu lwandle lusezimweni ezimbi kakhulu, kunezilwane eziningi ezincelisayo ezijwayele lezi zindawo. Iningi lazo linoboya obumhlophe obusebenza njengokufihla nokuvikela emakhazeni. Ungabala ngaphezulu noma ngaphansi izinhlobo ezingaba ngu-400 zezilwane futhi zivumelaniswa namakhaza amakhulu akulesi sifunda. Phakathi kwezaziwa kakhulu sinezinhlobo eziyisi-6 zezimpawu zamanzi nezingonyama zasolwandle, imikhomo yezinhlobo ezahlukahlukene kanye nebhere le-polar, okuyaziwa kakhulu.
Kukhona nezinhlamvukazi ezincane ezaziwa ngokuthi i-krill ezibamba iqhaza elibalulekile kupiramidi yemvelo yasolwandle. Izimila zincane kakhulu, zakhiwe ngobulembu nobulembu.
Izikhumulo zeqhwa ezakha e-Arctic Ocean ziyizixuku ezinkulu ezibandayo. Indawo engeyona eyasemanzini ikhula ngosayizi ophindwe kabili ebusika kanti izungezwe amanzi aneqhwa ehlobo. Lawa makhokho ngokuvamile afinyelela kumamitha amabili kuya kwangu-2 ubukhulu futhi ziqhutshwa njalo ngamanzi nomoya oqhamuka eSiberia. Ekugcineni singabona izingcezu ezithile zeqhwa ezishayisanayo bese zihlangana ngokuphelele. Lokhu kudala umgogodla wokudangala ophindwe ngaphezu kokuphindwe kathathu ubukhulu bamakepisi aqale akhiwa.
Kungashiwo ukuthi usawoti walolu lwandle ungaphansi kunayo yonke emhlabeni. Lokhu kungenxa yokuthi umhwamuko uphansi kakhulu kanti namanzi ancibilikayo, amnandi, yiwo anomthelela kuwo.
Kulinganiselwa ukuthi kulolu lwandle Ama-25% azo zonke izinqolobane zomhlaba zikawoyela, igesi yemvelo, ithini, imanganizi, igolide, i-nickel, i-lead ne-platinum ziyatholakala. Lokhu kusho ukuthi ukuncibilika kuvumela ukufinyelela kulezi zinsizakusebenza njengendawo yamandla nendawo yamasu ebaluleke kakhulu ekusaseni. Lolu lwandle luyindawo enkulu kunazo zonke yokugcina amanzi emvelo emhlabeni. Ukuncibilika kwayo kubangela ukuphela kwayo okuseduze.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-Arctic Ocean.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » I-Arctic Ocean